Ahina ho nanodinkodim-bola ampolony miliara Ariary: “Wanted” i Arizaka Rabekoto Raoul | NewsMada
Ifampitadiavana. Efa namoahan’ny fanjakana didy tsy fahazoana mivoaka any ivelany (IST) kanefa re siosio izao fa hoe tafatsoaka any ivelany. Namoahan’ny Bianco filazana fikarohana ny tale jeneraly teo aloha an’ny Cnaps, Rabekoto Arizaka Raoul. Ahina ho nanao fanodikodinam-bolan’ny Cnaps mitentina ampolony miliara dolara Ar. ”Wanted”!
Nilatsaka ny filazana fikarohana avy amin’ny Bianco. Tsy hita popoka ary tsy fantatra na aiza na aiza ny tale jeneraly teo aloha an’ny Cnaps ity. Navoitran’ny tale jeneralin’ny Bianco, araka ny fanambarana nataony, omaly, fa efa namoahana didy tsy fahazoana mivoaka any ivelany (IST), ny 3 febroary lasa teo, io tompon’andraikitra io nefa izao voalaza fa any ivelany izao. Navoakan’ny haino aman-jery samihafa fa efa any Soisa izy amin’izao fotoana izao rehefa nihazo ny tany Nosy Be ny 19 febroary lasa teo. Nandray fiaramanidina nankatsy Nosy La Reunion izy ary avy eo, nihazo ny any amin’ity firenen-dehibe any Eoropa ity.
Etsy andaniny anefa, notorin’ny eo anivon’ny filankevi-pitantanan’ny Cnaps Rabekoto Arizaka Raoul noho izy ahina ho voasaringotra amin’ny raharaha fanodinkodinam-bola amina miliara maro tao amin’io trano fiahiana ny sosialin’ny mpiasa io. Notsiahivin’ny fanambaran’ny Bianco fa efa nandeha tao anatin’ny 10 andro ny fanadihadiana azy momba ity raharaha ity raha efa tamin’ny fiandohan’ny taona ny niantombohan’izany.
Tsy tonga niatrika ny fanadihadian’ny Bianco
Nampiantsoina teny amin’ny Bianco Ambohibao ny tenany 20 febroary. Tsy tonga niatrika ny fanadihadiana tokony ho natao taminy anefa ity filohan’ny federasion’ny baolina kitra (FMF) ity. Nanoina ny antso sy tonga teny an-toerana nohadihadiana kosa anefa ireo namany, ahina ho mpiray tendro aminy. Nanomboka teo izany, tsy mazava intsony hoe nahoana no nandositra ity mpitantana teo aloha ny eo anivon’ny Cnaps ity. Efa herinandro mahery rahateo ny nielezan’izany feo amin’ny fandosirana izany. Tsy azo nohamaivanina izany ka izao nanapa-kevitra izao ny eo anivon’ny Bianco namoaka io filazana fikarohana io hitondrany fanazavana momba izao raharaha izao eo anivon’ny fitsarana sy ny momba ireo raharaha ahina ho naha voasaringotra azy, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny Bianco hatrany.
Resabe etsy sy eroa…
Araka izany, zary lasa resabe any anaty tambajotra sosialy any ity raharaha ity. Mipetraka avokoa ny karazana fanontaniana. Eo ny gaboraraka sy ny tsy fahafehezana andraikitra. Ny mety ho firaisan-tendro na koa ny tokony hanesorana tompon’andraikitra maromaro amin’izao raharaha mety ho nahatafaporitsaka azy izao…
Na izany aza anefa, tsy misy ifandraisany amin’ny tontolon’ny baolina kitra izany rehetra izany.